रात छिप्पिँदो थियो, सायद चुक घोप्टिएझै“ गरी । तपाईंको कोलाहलमय सहरमा बल्ल ध्वनि प्रदूषणको मत्थरताले स्थान पाउँदै थियो होला । हो, त्यही समय एकादेशको कुनै एक कुटीमा मलाई छिटो पुग्नु थियो ।
सडक अलपत्र त्यही भुइँमा असरल्ल, अस्तव्यस्त लडिरहेकै थियो । त्यहीमाथि म आफूलाई बिना सङ्कोच डो¥याइरहेको थिएँ । सडक नापिरहेको थिएँ या जिन्दगीको नाप लिँदै छोट्याइरहेको थिएँ । जे होस्, यो निष्पट्ट अँध्यारोमा गन्तव्यतिरै पाइला बढेको थियो । गल्लीका कुकुरहरू घरीघरी रातको चकमन्नता चिर्दै भुकिरहेका थिए । कुनै बेला तिनको भुकाइ डरलाग्दो पनि हुन्थ्यो । लाग्थ्यो, ती सुतिरहेका आत्माहरूलाई बिउँझाइरहेका छन्, केही भनिरहेका छन् –‘कति सुत्छौ, अब त उठ !’
मन ढक्क अडियो । श्वास फुलेर आयो । अचानक डरले डेरा जमाइसकेको झै“ लाग्यो । मुटुले ठाउँ छोडिसकेको थियो । एउटा कालो छायाँ आफ्नै अगाडिबाट हिँडेको देखियो । पोथ्राइलो झाडीबाट निस्किएको छायाँ छेउ हुँदै मध्य सडकमा फुत्त हिँडेको आफ्नै आँखाले देख्दा गोेडा लगलग काँपेको चाल पाएँ ।
म जहाँको त्यही“ अडिएँ ।
‘थुक्क !’ आफै“लाई हकार्न मन लाग्यो । आफै“प्रति हाँसो पनि उठ्यो । जाबो एउटा कुकुरदेखि पनि डराउने तँ लाछी, डरछेरूवा रहेछस्, मनमनै आफै“लाई गाली गरेँ । कुकुरको छायाँ हिँडेको थियो त्यो । पल्लोपट्टिबाट आएको प्रकाशको कारणले छायाँ सडकमा परेको थियो ।
मनमनै हाँसो पनि उठ्यो । खुल्ला आकाश, शान्त वातावरण र सडकमा एक्लो यात्री म मात्र थिएँ । अलिकति थियो त शरीरमा अल्कोहलको धङधङी ।
आफैलाई गिज्याउँदै पाइला अघि सार्दै रहेँ । पर–पर कुनै घरको सजावट र उज्यालो चहक पनि देखिन्थ्यो । त्यो रात्रीजीवनको समय कटाउने थलो हो भन्न सकिन्थ्यो । त्यहाँबाट प्रतिध्वनित सङ्गीतका धुन चर्काे आवाजमा निस्किएको हुनुपर्छ, यहाँसम्म आउँदा मधुरो सुनिन्थ्यो । अर्धनग्न होर्डिङबोर्ड यहाँबाट पनि प्रस्टैसित नियाल्न सकिन्थ्यो ।
रात्री यौनजीवनको रमाइलो क्षण त्यही बिताउन पाइन्छ । काठमाडौँको रात्रीजीवन अचेल बडो सहज भएको छ ।
दिउँसोको समय बितिसकेपछि हामी साँझ पर्ने बेलामा भेट्टिएका थियौ“ । घण्टाघरको जामे मार्केटमा रहेको पुस्तक पसललाई हामीले मिटिङ प्वाइन्ट बनाएका थियौ“ । (तपाईँलाई सम्झिन गाह्रो भएन होला भन्ने मलाई लागेको छ, किनकि तपाईं पनि कहिलेकाही“ त्यही पुस्तक पसलमा साहित्यिक कृति किन्दै गरेको कसैले त देखेकै होला ।) हो, त्यही“ हाम्रो भेट सधै“झै“ भएको थियो । मौसम हिमालयको बिरान जङ्गलको एकान्त कुनामा नवयौवनाको गोरो छाती खुल्ला भएझै“ बिल्कुल नाङ्गो थियो । चिसोले शरीरको अङ्गअङ्गको नाप लिइरहेको जस्तै लाग्थ्यो ।
एकछिनपछि हामी बागबजारको एउटा होटलको कुनामा थियौ“ । एकान्तले यहाँ हामीलाई साथ दिइरहेको थियो ।
‘चिसोमा जिउ तताउने काम यो वाहियात भूल मात्र हो । शरीरको तातोजस्तो त्यो मजा यसमा कहाँ ।’ कमलले टेबुलमा राखेको गिलास उठाउँदै भन्यो ।
कमलराज यौनका वाहियात कुरा आफ्नो मुखबाट ओकल्दै थियो । यस्तो लाग्यो ऊ रात्रीजीवन र स्त्रीका बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान राख्दछ ।
‘यी आवश्यक कुरा होइनन् ।‘ विजयले कुरा अन्तै मोड्न चाहे । उसले जीवन र यथार्थता भोग्नु र झेल्नुमा अन्तर रहेको कुरा गरे । हिजो आजका प्रयोगसम्बन्धी धेरै जानकारी गराए ।
‘हो, प्रयोग आवश्यक छ । प्रयोग यौनमा पनि आवश्यक छ आजको दिनमा’ कमल उर्जा थप्दै गिलासमा व्यागपाइपर भर्दै थियो । हामी निक्कै बेरसम्म शान्त वातावरणको होटलको एक कुनामा गफिइरहेका थियौ“ ।
त्यसबेला मलाई विजयको ‘विजेता’ कथाको मुख्य पात्रको याद आइरहेको थियो । उसले भोग्नुपरेको कुण्ठित यौनजीवनको पनि दृश्य आँखाभरि नाचिरहेको भान हुन्थ्यो ।
‘च्याटमा यौन क्रियाकलाप गर्छन् हिजोआज’ कमल मादकतामा हल्लिरहेको थियो र भन्दै थियो, ‘नयाँ प्रविधिको फाइदा र प्रयोग हो यो ।’
‘म त भन्छु, यौनशोषणको अर्काे रूप र प्रयोग हो । स्त्रीहरू अब यसरी पनि शोषित र पीडित हुनेछन् । पुरुषले फाइदा लिइरहेको उनीहरूले पत्तो नै पाउँदैनन् ।’ विजयले नयाँ थप कुरा भनिरहँदा मलाई विश्वप्रसिद्ध सुन्दरी क्लियोपेट्राको सम्झना भइरहेको थियो । जसले आफ्ना यौवनको जालमा धेरैलाई फसाएकी थिइन् र त्यसै यौवनको उन्मादले उनलाई नै डसेको थियो ।
होटलबाट निस्कदा बाहिर अन्धकारले प्रभुत्व जमाउने सुरसार गरिसकेको थियो । बत्तीको उज्यालो कतै–कतै थियो । सबै पसलहरू बन्द थिए । धेरैबेर बसेको थाहा पायौ“ । अल्कोहल शरीरको नशा–नशामा दौडिरहेको थियो ।
हामी छुट्टिएर आ–आफ्ना गुँडतिर बाटो नाप्न लागिप¥यौ“ ।
अन्धकार र सुनसान गल्ली हुँदै म आफ्नो कुटीको सामुन्ने पुगेँ । ढोका बन्द थियो । ढोकाले मलाई एकोहोरो हेरिरहेथ्यो । म भने यतिबेला भित्र पसिसकेको थिएँ । ढोका खोल्नै परेन ।
भित्र पस्नासाथ शरीर अनौठो किसिमले हल्का भएको महसुस भयो । खाना खाने मन भएन । कोठामा मधुरो उज्यालो फैलिएको थियो । शून्यता त्यहाँ व्याप्त थियो । यस घरमा म एक्लो छु जस्तो भान भइरहेको थियो । झ्यालहरू सबै ड्यामडुम्म बन्द थिए । तर झ्यालबाहिरको दृश्य भने म देखिरहेको थिएँ । कस्तो आश्चर्य थियो भने बाहिरको अन्धकार सम्पूर्ण मेरो आँखा अघिल्तिर छर्लङ्ग थियो ।
अघिसम्म थकान अघ्घोरै लागेको थियो, जुन अहिले बिल्कुल थिएन । यो कस्तो जादु थियो ?
‘आज मलाई के भएको छ ?’ आफै“लाई मनभित्रै प्रश्न गरेँ जवाफ केही थिएन । आफू को हुँ भन्ने पनि बिर्सिएको भान भयो ।
‘ओहो ! म त आखिर म नै हुँ ।’ सोच्छु ।
टेबुलमा तस्बिरहरू ठडिएका छन् । मेरो आफ्नो तस्बिर छ, जहाँ एउटी सुन्दर युवतीको पनि फोटो छ । जुन मेरी श्रीमतीको हुनुपर्छ ।
‘मलाई पर्खिरहेकी होली’ अचानक केही याद आएझै“ भयो । वास्तवमा म मेरै घरभित्र थिएँ । त्यसैले कुनै द्विविधा थिएन मलाई आफ्ना शयन–कक्षसम्म पुग्न । म आफ्ना घर यसैका लागि यो रातको समयमा त्यत्रो लामो बाटो काटेर आएको थिएँ ।
ऋाफ्नो कोठामा जानुअघि लगाइराखेको कपडा खोल्न मन लागेको थियो । सधै“ लुगा फुकालेर भित्ताको ह्याङ्गरमा झुन्ड्याउने गरेको थिएँ । कस्तो अचम्म ! त्यहाँ लुगा पहिलेदेखि नै झुण्डिएको थियो । त्यहाँ मैले अहिले लगाइराखेको लुगा झुण्डिरहेको थियो । मलाई चक्कर आएजस्तै भयो, मैले केही बुझ्नै सकिरहेको थिइनँ ।
घटघटी पानी पिएँ, टेबुलमा रहेको गिलास उठाएर पिएको थिएँ । त्यो वास्तवमा पानी थिएन । मुख फेरि एकपटक गन्धमय भइदियो । पीरो स्वाद मुखमा पोलेर आयो ।
अल्कोहल ज्यादै नै लागेको महसुस भयो । म सरासर आफ्नो कोठाको ढोकामा पुगेँ । ढोका मैले खोल्नै परेन । म लगत्तै कोठाभित्र पुगेँ । त्यहाँ एकदमै मधुरो प्रकाश फैलिएको थियो । राति सधै“ सुत्दा रातो मधुरो बत्ती बाल्ने गथ्र्याैं हामी । पुष्पाले सुत्नुअघि नै यो बत्ती बालेर सुतेको हुनुपर्छ, मलाई यस्तै लाग्यो ।
यतिबेला म भित्री गन्जी र अण्डरवेयरमा मात्र छु ।
तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । एउटा लोग्नेमान्छे आफ्नो कोठामा सुत्न गइरहेको छ, त उसको हालत कस्तो हुन्छ ।
तर, यतिबेला म आश्चर्यताको चरमविन्दुमा थिएँ, पाठकवृन्द । म,...म यो के देखिरहेको थिएँ । मेरी श्रीमती पुष्पा अर्कै पुरूषसित सुतिरहेकी थिई । पलङमा रहेको ओछ्यान अहिले अस्तव्यस्त थियो । लाग्थ्यो, यहाँ केहीबेर अघिमात्र ठूलै युद्ध मच्चिएको थियो, जस्तो भाले कुखुरा र पोथी कुखुराले निक्कैबेर घम्साघम्सी गरेर भालेले पोथीमाथि पुरूषार्थ जमाएर जितेको होस् ।
पुष्पाको शरीरमाथिको लुगाले उसका सम्पूर्ण अङ्गको राम्रोसित सुरक्षा भने गरेकै थिएन । उनी विल्कुल अर्धनग्न देखिन्थिन् । उनको गोरो तिघ्रा म यतिबेला सम्पूर्णरूपमा देखिरहेको थिएँ । छातीको आधी भाग उदाङ्गो थियो । हिमालको उच्चतामा हिउँको उज्यालो जस्तो देखिन्थ्यो । केशराशी असरल्ल फिँजिएको थियो, घना जङ्गलको बढ्दो विकरालताझै“ ।
उनको गुलाबी ओठ मलाईं जहाँसम्म थाहा छ साह्रै रसिलो छ । मेरै चुम्बनको प्रतीक्षामा छ झै“ देखिएको छ ।
म उनैलाई हेरिरहेको थिएँ । उनको त्यो मादक अङ्गलाई नियालिरहेको थिएँ । जसले मलाई उहिले मादकता दिन्थ्यो, तर आज ममा त्यस्तो केही थिएन ।
यतिबेला मलाई विजय मल्लको ‘कालो चस्मा’को याद आइरहेको थियो । उनले लगाएकोझै“ गरी म कसरी त्यो ‘कालो चस्मा’ लगाउन सक्थेँ ? उनले आफूलाई संयमताको सूत्रमा ढालेका थिए । यतिबेला म लगलग काँपिरहेको थिएँ ।
अचानक मेरा नेत्र विजुली चम्किएसरी चम्किए । म कुनै भ्रमको सिकार भएझै“ थिएँ । म चुपचाप हेरिरहेको थिएँ । पलङ छेउमै रहेको टेबलमा उभिएको फ्रेमभित्रको फोटोले मलाई एकोहोरो घुरिरहेको थियो । म भने पलङमा मस्त मेरी पुष्पासित सुतिरहेको भुसतिघ्रे शरीरलाई हेरिरहेको थिएँ । जुन मेरै शरीर थियो । अचानक लाग्यो, मेरै सामु मेरो अर्काे शरीर थकित भएर पस्रिएको थियो । यो कस्तो जादु थियो ?
म अल्कोहलको धङ्धङीमा अचेत थिएँ । म भ्रममा थिएँ कि जस्तो पनि लाग्यो । धेरै नजिकबाट एकोहोरो नियालेँ । वास्तवमा के भनौ“ त्यो म नै थिएँ । होइन, मझै“ लाग्ने शरीर भने अवश्य थियो । म त म नै थिएँ जो आफ्नै प्रतिविम्बझै“ कुनै शरीर नियालिरहेको थियो ।
जाडोमा पनि गन्जी र अण्डरवेरमा मात्र थियो, त्यो मस्त सुतिरहेको शरीर । म आफै“ पनि यही अवस्थामा थिएँ । दुरूस्त देखिन्थ्यौ“ । हे भगवान, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ! म अत्तालिएँ । चिटचिट पसिना आउन थालेथ्यो ।
देख्छु, सिलिङपङ्खा अघिसम्म बन्द देखिएको अहिले फनफनी नाचिरहेको छ । मधुरो रातो बत्ती हरियो, नीलो बलेको देखिन्छ । के भइरहेको छ थाहा पाइनँ ।
म एकपल्ट त्यस मझै“ लाग्ने शरीरलाई पुनः घुरेर अवलोकन गर्न खोजेझै“ गर्दै थिएँ । कोही अरू नै हो कि भन्ने उद्देश्यले हेरेको मात्र हुँ । अहँ, त्यो म नै थिएँ । पिठ्यूँको दाग मेरै थियो । सोचेँ, यो कसरी हुन सक्छ । फनक्क फर्किएर उभिएँ । मलाई अब त्यो हेरिरहन पटक्कै मन थिएन । मेरो पिठ्यूँ त्यसतर्फ फर्काएर उभिइरहेको थिएँ । यसबेला मेरो सामुन्ने भने एउटा विशाल ऐना अवश्य थियो । ऐनाले मलाई एकोहोरो घुरिरहेको थियो ।
केवल ऐनामात्र थियो । त्यहाँ मेरो प्रतिविम्ब पटक्कै देखिनँ । कस्तो आश्चर्य ! म ठीक ऐनाको अघिल्तिर उभिएर हेरिरहेको थिएँ । ऐनाले मलाई हेरिरहेको लाग्थ्यो । ऐना कुनै भित्तोझै“ भयो, किनकि त्यहाँ म थिइनँ ।
अब भने मैले बुझिसकेको थिएँ । ओछ्यानमा सुतिरहेको व्यक्ति किन मझै“ थियो । यो कोठा, ओछ्यान र घरको झझल्को मेरो मस्तिष्कमा सपनाझै“ भयो । म त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थेँ । औडाह भएर बेतोडले कुद्ने मन तिव्र भएर आयो । त्यहाँबाट कुदेँ । मेरो कुदाइ अचानक त्यही ऐनामा गएर ठोक्कियो ।
यो के ? म त्यही ऐनाभित्र विलिन भएको थिएँ ।